Hut Amazigh at Desert Camp Chraika & Sahara uhambo
Mhamid, Souss-Massa-Draa, i-Morocco
U-100% wezivakashi zakamuva unikeze u-Mohamed & Agata izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
Uyemukelwa endaweni lapho umgwaqo uphela khona, bese kuqala izihlabathi ezinkulu. Ikamu lethu lisendaweni eyimizuzu eyi-15 ukusuka esigodini sase-M'hamid, okuyindawo ekahle yokuqala noma yiluphi uhambo ngokujula ogwadule, esikujabulelayo ukulihlela.
Amaqhugwane ethu athokomele enziwe ngokhuni lwe-eco azokugcina ufudumele ebusuku futhi anikeze ukuphola emini. Ugesi ovela kumandla elanga uhlinzekwa eqhugwaneni ngalinye. Ibhulakufesi eligcwele laseMoroccan linikezwa nsuku zonke futhi lihlala lifakiwe enanini lokuhlala.
Siyakwamukela ogwadule, bangane!
Indawo esihlala kuyo iwugwadule oluhle, lwasendle lwaseSahara. Simi khona kanye lapho kuqala khona izindunduma zesihlabathi. Lapha ungakwazi ukujabulela ukuthula, vumela amehlo akho aphumule emkhathizwe futhi ubuke ukushona kwelanga okumangalisayo nsuku zonke.
I-Tajine eduze nomlilo, ibhulakufesi elinikezwa elangeni lasekuseni elifudumele, ukugibela ikamela, umzala nomndeni wethu, amakilasi endabuko e-Saharawi henna noma amakilasi okupheka angeminye yemibono yokuchitha isikhathi ekamu.
Kodwa lesi kumane kuyisiqalo!
I-Desert Camp ayilona ikhaya lethu kuphela, kodwa futhi iyindawo lapho siqala khona uhambo lwethu lwe-DreamTeam Caravan sijula ogwadule, futhi lapho sibuyela khona.
Abaqondisi bethu abanolwazi bayazi yonke indlela lapha futhi bayayiqonda imithetho yasogwadule. Awudingi ukubheka phambili uma ufuna indlela ephephile, enesibopho yokuhlola iSahara. Sihlela uhambo oluyimfihlo, oluqondene nawe kokubili nge-4x4 kanye nohambo lwamakamela.
4.92 ·24 okushiwo abanye
Uvuka nsuku zonke ukuze uthole umbono omuhle wezindunduma ezincane lapho ongahamba khona ungafake zicathulo futhi ujabulele ukuthula. Futhi kuyisiqalo esihle sanoma yiluphi olunye uhambo olujulile eSahara.
Siyajabula ukuchitha isikhathi nezivakashi zethu, sibase umlilo ngomculo ebusuku noma sivakashele idolobhana lakudala iM'hamid ndawonye.
Njengoba ikamu kuyikhaya lethu, sihlala sikhona ukuze sisize!